Sida loo helo caawinaad turjumaad bilaash ah | USAHello | USAHello
Ma waxaad barashada Ingiriisiga? Ma u baahan tahay caawinaad turjumaad bilaash ah? Ma u baahan tahay turjubaan aad? Waxaa jira dhowr apps iyo websites in aad ku caawin kartaa oo lacag la'aan ah.
Waa maxay turjubaanada iyo turjumaanada?
A Turjubaankii kuweeda wax qoraal ah oo ka mid luqad kale. An turjubaan Celin waxa qof ayaa sheegay in hal luqad qof kale ee afka qofka kale, si ay ula xiriiri karaa kasta oo kale oo.
Sidee baan ku heli karaa caawinaad turjumaad bilaash ah?
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah khayraadka turjumaan iyo turjumaadda free waxaad isticmaali kartaa.
Tarjimly waa adeeg weyn oo lacag la'aan ah turjumaad ee qaxootiga, Entry Level, iyo dadka caawiyaan qaxootiga. Waxay kaa caawin doona inay la xiriiraan marka aad u baahan tahay ugu. Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad sharaxdo wax dhakhtarkaaga ama macalinka ilmahaaga. Ama laga yaabaa in aad akhriska dukumenti xafiiska socdaalka. Waxaad xitaa waxaa laga yaabaa in dukaanka raashinka.
Adeegga free dhakhso leh kugu xiri doona mid ka mid ah Tarjimly ee iskaa wax badan oo ku hadla afkaaga iyo sidoo kale English. kaliya Waxaad isku diiwaan gelin kartaa in oo bilaabi fariimo la turjumaan. Haddii aad rabto, turjubaano Tarjimly sidoo kale kaala hadli doona telefoonka adiga iyo qofka aad rabto in aad la xiriiraan si ay u. Waxay idin maqli doonaa, ka dibna idinka sheego, waayo,. Waxaad kala soo bixi kartaa app ka Apple dukaanka iyo Google Play.
isticmaalka barnaamijka The Facebook Rasuulka, si aad u baahan tahay si ay u gasho in la Facebook ka hor inta aanad u isticmaali kartaa. Marka aad qortey, waxaad ka heli doontaa screen Rasuul sidan oo kale ah. Waxaad sidoo kale si toos ah ku xidhan karto on Tarjimly ee Facebook page.
Waxaad la si dhakhso ah xiri doona turjumaan ah oo tabarucidda si ay kuu caawiyaan. Waa arrin si fudud loo isticmaali!
turjumaad Free caawimaad online
Waxaa jira qaar ka mid ah adeegyada turjumaada lacag la'aan ah ayaa laga heli karaa online. Waxaad geli kartaa erayada afkaaga, Oo iyaga waa la turjumay luqad kale oo aad doorato. Ama waxaad ku qor karaa in loo dhigo Ingiriisi aadan fahmin, iyo barnaamijka iyaga siin doonaa inaad afkaaga. Adeegyadan waxaa sidoo kale laguu ogolaado in aad geliyaan dukumenti in la turjumo.
Sida loo isticmaalo caawinaad turjumaad free online
Tag Google turjumi
Door ah "turjumi ka" iyo "turjumo in ay" luqadood
Nooca ama aad nuqulka iyo paste in qoraalka aad rabto in aad u turjumaan
Adeegyadan waxaa sidoo kale laguu ogolaado in aad geliyaan warqad ku turjumi
turjumaadaha ayaa had iyo jeer ma kaamil ah, iyo tayada kala duwan ka mid ah luqadaha. Laakiin iyagu waa qalab aad u faa'iido badan.
Voice turjubaan app
Haddii aad qabto smartphone a, waxaad isticmaali kartaa Google Translate codsiga kaliya ka hadlayey in ay! Waxaad dhahdaa wax ku qoran luqaddaada, iyo app ka hadli doonaa ka dib markii Ingiriis ama afaf kale.
Note: ma luqadood oo dhan waxay leeyihiin hadlo daafaca adeegga, laakiin qoraalka ka muuqan doontaa on your screen xitaa haddii adeeg-dib hadal uusan ka bixiyeen afkaaga.
Sida loo isticmaalo app turjubaan codka
Download iyo furo app
Hit ah calaamad makarafoonka yar
Hadal xukun iyo sugto in ay dib u la hadlayaa kuwiinnan
app ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad qori qoraalka fartaada, waxaa nooca in, ama xataa qaado sawirka waxaa ka mid ah oo u soo dir.
Iyada oo qaar ka mid ah luqadaha, aad kala soo bixi kartaa file turjumaad in qalab aad. Tani waxay u ogolaaneysaa in aad isticmaasho app ah xitaa marka aad offline.
Daawo video ah oo muujinaya sida loo isticmaalo Google Translate app.
fasalada Our free kaa caawin kartaa inaad hagaajisid Ingiriisi
Ugu dambeyntii, hubi in aad isticmaasho our fursadaha laba luqadood oo turjumaad on website this! Click on the “Dooro luqadaada” button huruud sare ee goobta iyo turjumi goobta gelin afkaaga.
Waxaan sidoo kale waxay bixiyaan a class GED® free qaab laba luqadood. Taas macnaheedu waxa weeye in aad ka baran kartaa waxyaabaha ku jira labadaba Ingiriisi iyo afkaaga. Xitaa haddii aadan u baahan tahay inaad wax ka barato si aad u diblooma GED®, waa hab wanaagsan inaad wax ka barato English. dadka Waannu helnay kii baran adeegsanaya qaabkan soo laba luqadood hagaajiyaan Ingiriisi.
websites Multilingual ee USA
Baro Ingiriisi goobta online la Global Ingiriisi
Ilmahaagu ciyaari karo kulan si ay u bartaan Ingiriisi - Lingokids
Ma u baahan tahay caawimaad barashada Ingiriisiga?
Halkan waxaa ku qoran liis ay ku qoran qaar ka mid ah website-yada ugu fiican si ay u bartaan Ingiriisi.